Nahazo Tsiny Ny Polisy Toniziana Noho Ny Fampijaliana Ho Faty Tovolahy Iray · Global Voices teny Malagasy
Nahazo Tsiny Ny Polisy Toniziana Noho Ny Fampijaliana Ho Faty Tovolahy Iray
Voadika ny 12 Novambra 2013 23:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Nederlands, Italiano, English
Nenjehina sy nosamborin'ny polisy i Walid Denguir, 34 taona tamin'ny 1 Novambra teo talohan'ny nitondrana azy tao amin'ny tobin'ny polisy Sidi Bachir ao andrenivohitra Tunis. Ora iray avy eo, naharay antso an-tarobia avy amin'ny polisy manampahefana ny renin'i Faouzia izay nilaza taminy fa namoy ny ainy noho ny aretim-po ny zanany lahy.
Tao amin'ny hopitaly Charles Nicole ao Tunis, nanamarika dian-dratra teo amin'ny loha sy mangana tamin'ny vata mangatsiakan'i Denguir ny reniny sy ireo fianakaviany. Mampiseho diam-bono sy fampijaliana ireo sary marobe tamin'ny vatan'i Denguir efa tsy miaina intsony [tandremo, mampihoro-koditra ny sary: eto, eto sy eto], alohan'ny nandevenana azy tamin'ny 3 Novambra.
Mandeha rà ny vavany sy ny orony, nokasihako ny andriny ary tsapako fa toa vaky ny lohany satria misy tresaka eo amin'ny andriny sy ny tampo-dohany”, hoy ny renin'i Denguir nilaza am-pikiviana tamin'ny Mpanara-maso ny Zon'Olombelona HWR.
Nanamafy ity mpanao gazety iray, Tom Stevenson hoe:
Toa novakin'ny polisy ao #Tunisia ny lohan'i Walid Denguir, izay nosamborina ary namoy ny ainy nandritra ny fitànana azy tamin'ny 1 novambra.
Tamin'ny fanambarana nivoaka tamin'ny 3 novambra, niaiky ny Minisitry ny Atitany fa nisy ny “fampiasan-kery tafahoatra” ary nilaza fa efa misokatra ny fanadihadiana hamantarana ny antony nahafaty an'i Denguir. Nilaza ihany koa ity minisitra ity fa nokarohin'ny manampahafana i Denguir noho izy ‘voarohirohy tamin'ny heloka momba ny rongony” sy “fananganana andian-jiolahy’..
Efa vita ny fandidiampaty natao tamin'ny vatan'i Walid, saingy mbola tsy fantatra ny valiny. ‘Tsy azo hamarinina’ izany fe-potoana izany hoy Ghazi Mrabet, iray amin'ireo mpisolovavan'ny fianakavian'i Denguir:
Nahazo andian'olona tezitra ny fandevenana an'i Denguir:
Na aiza na aiza eto an-tany tsy misy afaka manamarina izany fahatarana izany amin'ny famoahan'ny dokotera ny valin'ny fandidiampatin'i Walid DEnguir. Ora fohy dia ampy ao amin'ny sampana fandidiampaty ao amin'ny hopitaly Charles Nicoles mba hamantarana ny antony marina nahatonga ny fahafatesany. Mety ho mpamerimberina heloka na jiolahy ity tovolahy olom-pirenena Toniziana ity saingy tsy azo ekena mihitsy ny fampijaliana azy, sy ity famonoana efa nomanina ity…Koa dieny mbola tsy tara, andeha takiana ny fisamborana ireo polisy manampahefana izay nisambotra sy nanao famotorana an'i Walid. Aza miandry izay fanadihadiana avy amin'ny fanjakana vao hisambotra ireto mpamono olona voarohirohy ireto, fantatra fa tsy mamaritra izay tompon'andraikitra tamin'ny famonoana ny valin'ny fandidiampaty fa manambara fotsiny ny anton'ny nahafatesany. AJANONY NY FAMPAHORIANA!!!
Tamin'ny 6 novambra, nitatitra ny gazety mpivoaka isan'andro Al-chourouk fa nilaza ny valin'ny fandidiampaty voalohany fa matin'ny fihetsehan'ny aretim-po i Denguir noho ny “rongony (cannabis) diso be loatra”. Ho an'ireo mpisera Twitter Toniziana, mampihomehy sy sarotra hinoana izany fanambarana izany.
rongony tafahoatra? Tsia, tsy vazivazy izany. Izany no valintenin'ny governemantantsika mba hanafenana ny fampijaliana an'i Walid Denguir.
Noho ny rongony tafahoatra no anton'ny nahafaty an'i Walid Denguir. Tamin'inona? Rongony? Sambany manerantany
Tamn'ny fanoratana tao amin'ny bilaogy iombonana Nawaat, nampatsiahy ireo mpamaky i Henda Hendoud fa roa taona mahery lasa izay, namoy ny ainy i Anis Omrani sy Abderraouf Khammassi rehefa avy nampijalian'ny polisy [fr]:
Hita tokoa, raha vao fampijaliana nitarika fahafatesana, manjary tsy miharihary loatra sy manjavozavo hatrany ny valim-panadihadiana avy amin'ireo dokotera mpandidy faty, mpitsara ary mpampanoa lalàna . Nahamarika izany izahay nandritra ireo tranga maro hafa, tahaka ny an'i Anis Omrani, izay namoy ny ainy tamin'ny 15 Aogositra 2011, tao an-tanàndehiben'i Tunis, nandritra ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy.
Nanambara ny minisiteran'ny Atitany fa namono tena tamin'ny fitsambikinana teny amin'ny lavarangan'ny trano mbola tsy nipetrahany mihitsy ity tovolahy ity. Kanefa, nampiseho ny lahatsary fa teo am-pitifirana azy ny polisy. Tranga hafa indray ny nahazo an'i Abderraouf Khamassi, izay namoy ny ainy tamin'ny 8 Septambra 2012, rehefa avy nampijaliana tao amin'ny biraon'ny borigadin'ny polisy tao Sidi Hassine, ao Sijoumi.
Hita mazava fa narovana ireo polisy voarohirohy tamin'ity tranga ity nandritra ny famotorana nataon'ny minisiteran'ny Atitany. Nilaza ihany koa ny valin'ny fandidiampaty fa tsy avy amin'ny fampijaliana ny anton'ny fahafatesana.
Nitranga ny fahafatesan'i Denguir raha nankasitraka ny lalàna vaovao mandràra ny fampijaliana ara-batana nolanian'ny antenimieran-dalàmpanorenana tamin'ny 9 Oktobra ireo fikambanana iraisam-pirenena miaro ny zon'Olombelona.
Namariparitra ny fandaniana ity lalàna ity ho “dingana lehibe mankany amin'ny fanafoanana ny fampijaliana ao Tonizia i Rupert Colville, mpitondra-tenin'ny biraon'ny Firenena Mikambana ao amin'ny Vaomiera Ambony momba ny Zon'Olombelona (OHCHR).
Namoy ny ainy nandritra ny fitànana azy tao amin'ny tobin'ny polisy i Walid Denguir 3 herinandro taorian'ny fandanian'ny antenimieran-dalàmpanorenana ny lalàna mandràra ny fampijaliana ao #Tonizia.